डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था ज’टिल बन्दै ! चिकित्सक संघद्वारा आ’न्दो’लनको घोषणा
काठमाडौं : चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आ’न्दो’लनको घोषणा गरेको छ । संघले बुधबार एक एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चरणबद्ध आ’न्दो’लनको घोषणा गरेको हो ।
केसीको १९ औँ असनसनको क्रममा भएका माग पूरा गर्न यसअघि संघले सरकारलाई ७२ घण्टाको समयावधि दिएको थियो । तर, सो अवधिमा वार्ताको कुनै वातावरण नबनेकाले संघले आ’न्दो’लनको घोषणा गरेको हो ।
जसअनुसार बिहीबार बिहान ९ देखि ११ बजे सम्म देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुमा आकस्मिक र कोभिड–१९ का सेवा बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै संघका शाखा कार्यालयहरु, देशभरका स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालहरुको प्रांगढमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई सामाजिक दुरी कायम गर्दैैै धर्ना दिने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।
यसैगरी संघका शाखा कार्यालयहरु र देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल वा उपयुक्त स्थानमा सामाजिक दुरी कायम गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई अर्को सूचना नआएसम्म कालोपट्टी बाँधी रिले अनसन गर्ने पनि तय भएको छ ।
संघले शुक्रबार १ दिनका लागि देशैभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुमा आकस्मिक र कोभिड–१९ का सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा संघले गरेको छ ।
शुक्रबारसम्म पनि पनि सरकारले वार्ता टोली बनाई सत्याग्रहको अन्त्य नगरिएको अवस्थामा संघबाट थप कडा वि’रोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिने बताईएको छ । २४ दिन देखि अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन् ज’टिल बन्दै गएको बताइएको छ ।